Amabhodlela ezondla abantwana
Amabhodlela omntwana wamanje wokudla angumkhiqizo ophezulu. Ukuma kwawo, ukuhlela, izinto zokwakha zakhiwa ngesisekelo seminyaka eminingi yocwaningo kanye nokuvivinywa komtholampilo. Ngakho-ke, ukukhethwa kwamabhodlela nama-nipples kubo kumele kusondele ngokuziphendulela. Phela, ibhodlela elikhethiwe ngokungakhethi lingabangela ingane ukuba ilahle isifuba, ifake i-bite engalungile, ibangele ukukhiqizwa kwegesi okwandayo ne-colic ebuhlungu.
Amabhodlela okudla okulungile
Okokuqala, ibhodlela lokudla kumele lihambisane nezindinganiso zokuhlanzeka, libe nesitifiketi. Izinto ezenziwe kuzo zibalulekile. Kumelwe ukuba abe non-toxic, ukumelana nenzalo, ungashintshi ifomu uma ubilisa, ungenawo amacembe abukhali, ungaphazi. Ngakho-ke, amabhodlela ashibhile wabakhiqizi abangaziwa ayavinjelwa!
Okwesibili, ukuma kwe-nipple kubaluleke kakhulu, ikakhulu uma umama edla umntwana. Iqiniso liwukuthi isimiso sokuncelisa amabele nama-nipple ahluke kakhulu. Ingono yesifuba ibamba ingane ukuze iphenduke emlonyeni. Uma uncelisa, kufanele wenze umzamo. Ibhodlela le-pacifier lingase libe "ngcibilike" ngezindebe zomuntu, kalula futhi ngokushesha. Uma usebenzisa i-oval teat teat evamile, lapho ubisi kuthululwa khona "umfula", izingane zivame ukuyeka ukuthatha amabele. Ngakho-ke, ingono efanele kufanele iphinde ibuyele ngokunembile ukuma kwesifuba, futhi ube nezinzwa ezifanayo zokuthinta ngesikhathi sokudla.
Ngesizathu esifanayo, kubalulekile ukukhetha izimbobo ezinsikeni. Ukukhula kwengane, uhlelo lokudla okunomsoco, kungakhathaliseki ukuthi lukhona ekufakeni impahla, ngesifuba noma ekudleni okuxutshwe kuthathwa ngokucabangela. Izibopho ezinsikeni ziyafana futhi zizungeza. Ingono enomgodi omelelekile awuhambisi ngisho noma ibhodlela liphendukile phansi. Kuyinto ewusizo futhi elula endleleni, ukuhamba. Izimbobo ezizungezile, kuye ngokuthi ububanzi bungaphila, ngokungahambisani ngokukhululekile, futhi zingadonsa ngamaconsi ambalwa. Ikhetho lokugcina likhetha, lifana nokuncelisa. Ingane inemizamo, iqeqesha isimiso sokugwinya futhi ukugaya ukudla okuncane kancane kuyasiza kakhulu.
Ukusebenzisa ekhaya ibhodlela lepulasitiki yanamuhla. Ngeke aphule, alula kakhulu, izandla zakhe azikhathali ekudleni. Futhi ngisho nengane ingayisekela ngokuhamba kwesikhathi. Izinzuzo eziyinhloko zebhodlela lezingilazi zihlala ziqinile nokuphathwa okunembile, kulula ukugeza futhi ukumelana nokupheka okuphindaphindiwe.
Kungcono ukuthenga amabhodlela omntwana womkhiqizi ofanayo. Bayoba namasayizi wezintambo ezibumbene nezinamba zamantombazane. Asikho isidingo sokugubha ubuchopho bakho lapho uthenga amaconsi amasha. Kulula uma intamo ibhodlela ibanzi. Kulula ukugeza, uthele amanzi bese ugcwalisa ingxube yobisi. Ngokwemvelo, ibhodlela elifanele kufanele libe nomaka wokulinganisa.
Lapho abantwana bephuza amabhodlela avamile abantwana, bayagwinya umoya. Kubangela ukubhoboza kanye ne-colic esiswini. Manje basithengisa amabhodlela ama-"anti-bullet" ahlukene nezinsipho ezikhethekile. Bavimbela ukungena esiswini somoya futhi kuyindlela enhle kakhulu kulabo mama abondla abantwana emabhodleleni. Yiqiniso, zibiza kakhulu futhi azikhululekile ukuzigeza.
Ngezinsana ezinhlanu ezinyangeni ezinhlanu zingakwazi ukubamba ibhodlela. Ngakho-ke, ungathenga ibhodlela lesimo esikhethekile: igobile, ngezibambiso, ngendlela ye-bagel noma encane phakathi. Ingane izobavimbela kalula.
Izingane ezivela ezinyangeni ezingu-3 zathengiswa iziphuzo eziphuza iziphuzo ezikhethekile nge-spout. Ngosizo lwabo, abazali bafundisa ingane ukuthi izisekelo zokuzondla.
Umkhuba wokugcina yizimabhodlela, ezifudumala ubisi ekushiseni okuhle.
Zingaki amabhodlela azodingeka
Ukuncelisa amama, ibhodlela elilodwa lanele. Kungase kudingeke ukuze uthole ukondla okungeziwe uma kwenzeka izinkinga zokwelapha, ngenxa yokwelapha kwamanzi noketshezi, isibonelo, kusuka ku-colic. Uma omama bedla ubisi lwebele, kodwa baboniswa, ibhodlela elilodwa lebisi elikhulu liwanele, kanti elinye lincane emanzini. Ngokudla okuxutshwe noma ukuhlanganiswa kwezimbali kuphela, kuzothatha amabhodlela ama-3-6.
Indlela yokufundisa ingane ukuhlafuna
Ingabe kufanelekile ukuthenga i-heater yezingane amabhodlela?
Indima ye-fontanel empilweni yomntwana
I-yoga yezingane kusukela ekuzalweni kuya emavikini ayisishiyagalombili: ukuthi ungabamba kanjani futhi uphathe umntwana
Ukuxoshwa kwengane ekunceliseni ibele
Ukuzivocavoca kwengane ebhola
Ungamshayela kanjani umuntu ku-cunnilingus?
Izinwele ezimfushane zangempela zamadodakazi avela eminyakeni engu-45 nangaphezulu
Uzoba yini ngonyaka ka-2018 weNja yeKapricorn
I-Easter enezithelo ezicandiwe
Silahlekelwa isisindo isikhathi eside: ukudla okuJapane
Amasiko omnyaka omusha waseRashiya, amasiko, izimpawu
Umlingisi odumile uKsenia Alferova
U-Elizaveta Boyarskaya njengo-Anna Karenina: ukubuyekezwa kokuqala, ukugxekwa, ukubuyekezwa, isithombe
Impumelelo emsebenzini, izindlela zokuwufeza
Indlela yokupheka isidlo sakusihlwa esijabulisayo
Ilayisi nosamatisi nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Impahla yamafutha abalulekile ylang-ylang
Indlela yokugcina isilonda ekhaya
Indlela indoda yangempela iziphatha ngayo: izibonakaliso ezingu-8 ukuthi uhlangane nesikhulu esihle